Jubbaland oo sheegtay inay ka feejigan tahay weerarada Al-Shabaab - Awdinle Online
Jubbaland oo sheegtay inay ka feejigan tahay weerarada Al-Shabaab
Maamulka jubbaland ayaa sheegay in iyada oo lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Ramadaan ay ka feejigan yihiin weerarada deegaannada Maamulkaas ay Al-Shabaab ka qorsheeyaan inay ka fuliyaan.
Taliyaha guud ee Ciidammada qalabka sida ee Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim (Aadan Goojaar) ayaa sheegay in deegaannada uu ka arrimiyo Maamulka Jubbaland aan lagu arki karin ruux hubeysan oo aan kamid aheyn Ciidamada Jubbaland.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Maamulka Jubbaland looga baahan yahay inaysan ogolaan in deegaannada Jubbaland lagu arko dad sameynaya waxyaabo lidi ku ah dhinaca Amniga,isla markaana ay tallaabo ka qaadaan.
Taliyaha guud ee Ciidammada qalabka sida ee Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim (Aadan Goojaar) waxaa uu sheegay inay jiraan dad siyaabo kale u dhigaya feejignaanta amni iyo hwolgallada ay Ciidamada wadaan,abalse aan laga aqbaleyn.
Previous articleAl-Shabaab oo markii u horeysay magacaabay guddi la socda Xaalada cudurka Corona
Next articleAl-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Lambar 60